Apetraho amin'ny Tompo ny adinao rehetra.
6 novembre 2018 by Njaka Ramanandafy
Fandalinana ny Boky : 1 Samoela
SAMOELA VOALOHANY 4 : 1 – 11
4:1 Ary tonga tany amin’ny Israely rehetra ny tenin’i Samoela. Dia nandeha ny Israely hiady tamin’ny Filistina ka nitoby teo anilan’i Ebenezera; ary ny Filistina kosa nitoby tany Afeka.
4:2 Dia nilahatra ny Filistina hiady amin’i Israely; ary rehefa raikitra ny ady, dia resin’ny Filistina ny Israelita, ka nahafatesany tokony ho efatra arivo lahy ny miaramila nilahatra tany an-tsaha.
4:3 Ary rehefa tonga tany an-toby ny olona, dia hoy ny loholon’i Israely: Nahoana no namely antsika teo anoloan’ny Filistina i Jehovah androany? Andeha halaintsika avy any Silo ho eto amintsika ny fiaran’ny faneken’i Jehovah, ka raha tonga eto amintsika izany, dia hamonjy antsika amin’ny tanan’ny fahavalontsika.
4:4 Dia naniraka nankany Silo ny olona haka ny fiaran’ny faneken’i Jehovah, Tompon’ny maro, Izay mipetraka amin’ny kerobima; ary tao Silo, teo amin’ny fiaran’ny faneken’Andriamanitra, izy mirahalahy zanak’i Ely, dia i Hofinia sy i Finehasa.
4:5 Ary rehefa tonga teo an-toby ny fiaran’ny faneken’i Jehovah, dia nihoby mafy ny Zanak’i Israely rehetra, ka dia nanako ny tany.
4:6 Ary rehefa ren’ny Filistina ny hoby, dia hoy izy: Inona re izany hoby mafy any an-tobin’ny Hebreo izany? Ary fantany fa tonga ao an-toby ny fiaran’i Jehovah.
4:7 Dia raiki-tahotra ny Filistina ka nanao hoe: Andriamanitra no tonga ao an-toby. Ary hoy koa izy: Mahita loza isika! fa tsy mbola nisy toy izao.
4:8 Mahita loza isika! Iza no hamonjy antsika amin’ny tanan’ireo andriamanitra mahery ireo? Ireo no andriamanitra izay namely ny Egyptiana tamin’ny kapoka rehetra tany an’efitra.
4:9 Mahereza, ary aoka hitomban-dahy ianareo, ry Filistina, fandrao hanompo ny Hebreo ianareo tahaka ny nanompoany anareo; misehoa ho lehilahy ianareo, ka miadia.
4:10 Ary niady ny Filistina, dia resy ny Israelita, ka samy nandositra ho any an-dainy avy izy rehetra, ary be dia be no maty, dia lehilahy telo alina mandeha an-tongotra tamin’i Israely no niampatrampatra.
4:11 Dia lasan-ko babo ny fiaran’Andriamanitra, ary maty izy mirahalahy zanak’i Ely, dia i Hofinia sy i Finehasa.
1-Nahoana no namely antsika teo anoloan’ny Filistina I Jehovah androany? Miroso amin’ny ady ny zanak’ Israely , nefa tsy mba nanontany an’ Andriamanitra akory. Azo antoka fa nosakanany izy raha nanontany Azy . Toa te-hiteny ireto olona ireto hoe: anay ny ady fa Jehovah hangina . Tsy mahagaga raha resy izy ireo . Ianao kosa , miantehera mafy amin’ilay afaka mampandresy anao.
2-Tsy i Jehovah fa ny fiaran’ny fanekena no ianteherana : Heverin’izy ireo fa hampahomby amin’ny ady ny fianteherana amin’ny fiaran’ny fanekena. Diso finoana izy fa miantehatra amin’ny zavatra hita maso fotsiny . Toy ny taranany tato aoriana ihany izay mitoky amin’ny Tempoly (Jer 7.4). Tandremo fa Andriamanitra no itokiana fa tsy anaram-piangonana na ny fombafomba .
3-Tanteraka ny Tenin’i Jehovah momba ny zanak’i Ely : Noho ny ratsy nataony tao amin’ny Tempoly no nahatonga an’ Andriamanitra hilaza fa andro iray no hahafatesan’izy roa lahy. Tanteraka izany. Mitondrà tena miendrika an’ Andriamanitra mba tsy ho ratsy fiafara .
« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-3